Ntuziaka site na ihe mgbochi: Ụdị dị iche iche SEO
Intanet nwere ike ịbụ isi iyi nke ndị ahịa maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Nnukwu ụlọ ọrụ na-erite uru site n'iji ịntanetị nke ha na-enweta ahịa site na gburugburu ụwa. Ndị na-elekọta weebụ nke na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ a na-ejedebe oge iji bulie ebe nrụọrụ weebụ ha. Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta (SEO) bụ usoro nke nwere ike iwelie ọnụnọ weebụ gị ma si otú ahụ bulie ahịa. SEO nwekwara ike imewanye okporo ụzọ ị nwetara site na engines ọchụchọ.
Ụlọ ahịa na-enweta ọtụtụ uru n'aka SEO - hospedagem ativacao imediata. Otú ọ dị, azụmahịa ọ bụla e-azụmahịa nwere ike ịchọ ụfọdụ ụdị ahịa ịntanetị iji nwee ihe ịga nke ọma. Dị ka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị ọrụ na-eji ụzọ dịka ahịa ahịa iji kpọta ndị ahịa, ebe ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike iji Social Media Marketing (SMM) nweta ndị ahịa ha. Na nke a, Alexander Peresunko, Semalt Onye Ahịa Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Nlekọta, nyere gị aka ịmatakwu ụdị SEO ndị a:
White okpu SEO. Nke a bụ SEO nke na - esote ntụziaka niile nke otu search engine. Usoro a kachasị mma ma nwee ike ịnweta uru ogologo oge maka weebụsaịtị. Dị ka ọmụmaatụ, White Hat SEO na-eji usoro dịka njikọ ụlọ , ihe ndị e kere eke, nchọpụta isiokwu yana usoro nhazi ndị ọzọ ziri ezi..Ọ bụrụ na onye nwe saịtị na-eji okpu okpu okpu, SE / saịtị ya ga-enwe ọkwa dị mma na Google SERP karịa saịtị nke ndị na-asọmpi ya. Na okwu, iji usoro a bụ usoro SEO kacha mma
Black Hat SEO. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ nwere ike ịnwa ịchọta search engine algorithm. Na nke a, ndị mmadụ nwere ike igwu egwu na njirimara site na nke ọ na-akwado weebụsaịtị. Ndị mmadụ na-enweta ụfọdụ nsonaazụ ogo site na iji usoro okpu ojii. Usoro ndị a na-ekwe nkwa inye gị nsonaazụ dị egwu n'oge obere oge dị mkpirikpi. Otú ọ dị, Black Hat SEO nwere ike ime nchọpụta njikwa na ebe nrụọrụ weebụ na ọbụna gbuo kpamkpam gị. Na nke kachasị njọ, saịtị gị nwere ike ịdebanye aha site na engines ọchụchọ.
Ọkpụkpụ See SEO Mgbe ị na-eji White ma ọ bụ Black Hat SEO, e nwere ụzọ dị iche iche nke webmasters nwere ike iji rụọ ọrụ n'etiti ụdị abụọ SEO. Ogwe uhie uhie nwere ụzọ niile ndị na-erughị eru dịka okpu okpu ma ọ bụ dị ka okpu okpu. A na - ejikarị ụzọ ụfọdụ dịka nri nri na Black Hat SEO. N'aka nke ọzọ, ụdị aghụghọ ahụ dị ka itinye SEO ọjọọ maka ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ime mgbanwe maka azụmahịa gị. Ụdị Ngwá Ọrụ Grey nwere ike belata ọkwa nke ndị asọmpi gị na SERP.
E-azụmahịa weebụsaịtị nwere uru nke ị nweta ndị ahịa site na weebụ; iji SEO nwere ike inyere saịtị aka iwelie ikikere ochichi ya na nkwado di elu. Nnukwu ụlọ ọrụ na-eji ohere a site na ịmepụta weebụsaịtị nke ọma maka ụlọ ọrụ ha. Ndị nwe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ike ịnweta ndị ahịa ha n'ụzọ ndị mmadụ na-arụ ọrụ na netwọk ọchụchọ na site na mgbasa ozi akwụ ụgwọ ndị dị na ngwá ọrụ weebụ ha. Ị nwere ike ịmepụta ọnụnọ nke ebe nrụọrụ weebụ gị site na iji ụfọdụ SEO ụdị ndị a kpọtụrụ aha na isiokwu ahụ.